Al-shabaab oo gacanta ku dhigay deegaan ku dhow Baydhabo | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Al-shabaab oo gacanta ku dhigay deegaan ku dhow Baydhabo
Dagaal u dhexeeyay Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-shabaab ayaa saakay waxaa uu ka dhacay deegaan ku yaalla duleedka Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Wararka aan ka heleyno deegaan lagu magacaabo Cara-gaduud oo u dhaw Garoonka diyaaradaha Baydhabo ayaa sheegaya in Al-shabaab ay weerar ku qaadeen Saldhig Ciidanka Koonfur Galbeed halkaas ay ku leeyihiin, waxaana goobta ka dhacay dagaal kooban.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in Al-shabaab iyo Ciidanka Koonfur Galbeed ay isdhaafsadeen rasaas xoogan, waxaana ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo aan weli la xaqiijin.
War qoraal ah oo lagu daabacay Baraha Internet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ku sheegteen inay dagaal kula wareegeen deegaanka Cara-gaduud oo ay ku sugnaayeen Ciidanka Koonfur Galbeed, isla makaana gacanta ay ku dhigeen hub.
Dhinaca kale ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana ay uga hadlaayan wararka sheegaya in Al-shabaab ay la wareegeen gacanta ku heynta deegaanka Cara-gaduud oo u dhaw Garoonka diyaaradaha Magaalada Baydhabo.
Previous articleMaxay ka tiri Wasaaradda Kalluumeysiga kalluun shalay soo caariyey?
Next articleGaari looga shakiyay inuu Qarax sido oo yaalla Waddo ku taalla Muqdisho
Ra’isul wasaaraha Dalka Hindia Oo Mar kale ka Hadlay Xaalada Degdega...
Mareeg Ali - August 15, 2019 0
Ra’iisal wasaaraha dalka Hindiya Narendra Mod oo ka hadlaayay munaasabad sanad-guuradii kasoo wareegaytay xiligii dalkaasi xuriyadda qaatay ayaa waxaa uu ka hadlay xaaladda Go’doonka...